Hiondrana any Italia an-tsokosoko Kaomorianina 2 sarona tany Nosy Be
Teratany kaomorianina roa nikasa hiondrana an-tsokosoko ho any Italia sy tsy manana taratasy ho eto Madagasikara no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny sisin-tany PAF Nosy Be, ny 8 oktobra teo tamin’ny 6ora sy 30mn maraina.
Nampiasa pasipaoro misoratra amin’olon-kafa sy nanao kolikoly. Nilaza ny lehilahy kaomorianina iray fa pasipaoron’ny kambana aminy mipetraka any Italia no saika hoentiny hivoaka an’i Madagasikara. Nanatona am-pahatsorana ny kaomisera lehiben’ny PAF any an-toerana izy ka nanolotra vola mitentina 1 300 Euros na 5 tapitrisa ariary mahery mba ho tambin’ny famoahana azy ho any Italia amin’ny alalan’ilay pasipaoro.
Mody nanaiky ny lehiben’ny PAF Nosy Be saingy nony tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina dia nosamborina avy hatrany izy niaraka tamin’ny namany iray mpiray tsikombakomba taminy. Ny mpiray tsikombakomba taminy dia tsy manana taratasy ara-dalàna amin’ny fipetrahany eto Madagasikara. Nampiasa kara-panondro hosoka ihany koa ny tenany entiny hivezivezena eto Madagasikara. Taorian’ny fanadihadiana natao dia natolotra ny fampanoavana any Nosy Be izy ireo ary nidoboka am-ponja vonjimaika